China S307 High speed vial labeling muchina Kugadzira uye Fekitori |S-conning
APPLICATION: yakakwira-kumhanya kwakanyatso kunyoreswa kwemabhodhoro uye mamwe madiki mabhodhoro
APPLICATION:high-speed precise labeling for vials nemamwe mabhodhoro madiki akatenderera Nzira dzekudyisa dzakamira uye kutakura midziyo midiki nescrew conveyor inokodzera mabhodhoro asingamire zvakasimba uye anodonha pasi nyore.
•Yakanyanya-kunyatsoshanda screw conveyor dynamic system inoita kuti mabhodhoro awedzere kugadzikana uye nemanyorero epamusoro panguva dzese kumhanya.
• Adopt mhepo silinda yekuramba mudziyo we, shuwa kuti unogona kunyatsoona uye kuramba zvigadzirwa zvisina kukodzera kana muchina panguva yekumhanya-mhanya.
• Kunyanya yeLyophilized Powder production line, pharma production line uye cryo vial labeling.
* Nyanzvi yeHMI yekubata sikirini: yakawedzera munhu yekubata yekubata chidzitiro
Iyo inogoneka S307 Yepamusoro Yekumhanya labeler yakashongedzerwa neitsva uye inokurumidza netcon control tekinoroji (inosarudza).Nekungodzvanya kweimwe-yekubata skrini, unogona kugadzirisa nyore marongero akasiyana echigadzirwa chako chinodiwa.
-Muchina wedu une servo madhiraivha anoburitsa chaiyo uye yakakwira yekumhanya inodzokororwa kunyora.Iyo inosvikika nyore vhiri reruoko inogadzirisa uye padivi njanji inokurumidza kugadzirisa inobvumira yakawanda "up-nguva" pamutsetse wako wekugadzira!Iyo S307 inoshandiswa mune angangoita ese maindasitiri akadai semishonga, zvigadzirwa zvekuchengeta munhu, chikafu, mavhitaminzi, zvekuzora, uye makemikari, uko kuvimbika-mu-kirasi ibasa rekugadzira nemazvo.
Muchina wese unodzorwa nekombuta, otomatiki kuona mabhodhoro ekunangwa nawolabel synchronously, uye midziyo zvakare inogona kuve yakashongedzerwa nemuchina unopisa wekudhinda
-Yakavakwa-mu-operation bhuku: vanotanga vanogona kudzidza kubva kuchiratidziro mashandisiro emakina mukati menguva pfupi.
Izvi zvinochengetedza zvese mari uye nguva panguva yekudzidziswa.
-Yakavakirwa mugwaro rekugadzirisa matambudziko: iyo inoratidzira yaizotungamira mushandisi kuburikidza nekugadzirisa matambudziko.
Speed 400 ~ 800bpm
Zvakapfuura: S308 High kumhanya rotary vial labeling muchina
Zvinotevera: Ndege Labeling Machine